मालपोत कर्मचारीको कर्तूत : नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर अर्कैको जग्गा बिक्री
साउन ५, २०७४
काभ्रे, ५ साउन – जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीले नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर अर्कैको जग्गा बेचिदिएका छन् ।
कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर घर समेत रहेको जग्गा बेचिएको हो ।
धुलिखेल नगरपालिका खड्पुमा रहेको सुकलाल सुवालको नाममा रहेको जग्गाधनीको जग्गा अर्कै सुकलाल सुवाल नाम गरेका व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको हो ।
सक्कली सुकलालका बुवाको नाम जोगनारायण भएपनि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले मालपोतमा रहेको ढड्डामा सक्कली सुकलालको बुवाको नाम परिवर्तन गरिदिएका हुन् ।
उनका बुवाको नाम मंगललाल बनाई नक्कली सुकलालको नाममा जग्गा नामसारी गरिएको फेला परेको हो ।
नक्कली जग्गाधनीको नाम सक्कली जग्गाधनीसँग मिलेपछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले बाबु र बाजेको नाम नक्कली अनुसार नै परिवर्तन गराइदिएका हुन् ।
आफ्नो जग्गा अन्यत्रै बिक्री भएको थाहा पाएपछि पीडित सुकलालकी छोरीले संशोधन भएको कागजातसहितको मिसिल माग गरेकी थिइन् । तर मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले मिसिल नभेटिएको भनेर उनलाई रित्तो हात फर्काइदिएका थिए ।
मालपोतले नै मिसिल गायब गरेपछि उक्त जग्गा कहिले र कुन कर्मचारीले किर्ते गरेर बेचिदिएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
यसरी मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले किर्ते जग्गाधनी खडा गरेर लापरवाही गरेका हुन् । तर यो विषयलाई जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख जयन्त कुमार भट्टराईले सामान्य मानवीय त्रुटि भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘मालपोतमा दैनिक यस्ता समस्या आउँछन्, हाकिमले सबै कागजपत्र भएका फाइलमा सही गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सबै कागजी प्रक्रिया पूरा भएका कारण उक्त जग्गाको नामसारी भएको हुनुपर्छ ।’
आफ्नो जग्गा बाबु बाजेको नाम संशोधन गरेर अर्कैलाई बेचिएको पाएपछि पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।
२०६४ साल भन्दा अगाडि नै सुकलालका बुवा जोगनारायणको नाममा रहेको श्रीखण्डपुर वडा नं. १ को कित्ता नं. १६९ र कित्ता नं १७० को जग्गामा किर्ते भएको हो । दुईवटा कित्तामा गरेर करीब आधा रोपनी जग्गामा रहेको घरसमेत रहेको छ ।
जग्गामा कायम सुकलाल सुवालका बुवा जोगनारयण सुवाललाई संशोधन गरी मंगललाल गराइएको हो ।
यही संशोधनको निर्णयले जग्गा मंगललालको छोरा सुकलालले प्राप्त गरेका छन् । यही जग्गालाई मालपोत कार्यालयको २०७० साल १० महिना २२ गते मिसिल नं. ४३४ को निर्णयबाट मंगललालकी बुहारी सविता सुवालले प्राप्त गरिन् ।
फेरि मिति २०७१ साल मंसिर महिना २४ गते सविता सुवालको नाउँबाट उक्त जग्गा उग्रतारा गाविस वडा नं. ६ बस्ने श्यामसुन्दर थापाको नाउँमा बिक्री भएको छ ।
यसरी मालपोत कार्यालयभित्रैबाट आफ्ना बुवाको नाममा रहनुपर्ने जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गर्दै बिक्रीवितरण गरिएको विषय सक्कली जग्गाधनी सुवालका परिवारले चाल पाएनन् ।
अहिले दुवै सुकलाल सुवालहरूको मृत्यु भइसकेको छ । आफूले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गामा एकाएक श्यामसुन्दर थापाले जग्गा छोड्न उर्दी जारी गरेपछि सक्कली जग्गाधनी सुकलाल सुवालकी छोरी नानीमैया ख्वन्जु अचम्ममा परिन् ।
हजुरबुवाको नाम परिवर्तन गरी आफ्नो बाबुको नाममा रहेको जग्गा बिक्री भएपछि उनी अहिले प्रहरी कार्यालय, मालपोत र कानूनी परामर्शका लागि दौडधूपमा रहेकी छन् ।
मालपोत कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले राति राति कर्मचारीहरू उक्त विषयका कागजपत्र मिलाउन काममा खटिएका छन् ।
मिसिल नै गायब
मालपोत कार्यलय काभ्रेमा अहिले जग्गाको प्रमाण राख्ने २९ ओटा मिसिलहरू नै गायब पारिएका छन् । कर्मचारीको मिलेमतोमा मिसिल हराइएको हो ।
मिसिल खोज्ने क्रममा उक्त मिसिल हराएको तथ्य फेला परेको हो । मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार पैसाको खेलले गर्दा मिसिल नै गायब पारिएको हो ।
साउन ५, २०७४ मा प्रकाशित
ढुङ्गेसाँघु सीतापाइला आमा समूहको पक्की भवन निर्माण पोखरा – पोखरा महानगरपालिका–१७ महतगौंडास्थित ढुङ्गेसाँघु सीतापाइला आमा समूहले १२ लाख रुपैयाँको लागतमा पक्की भवन निर्माण गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाबाट ३ लाख रुप...
प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा, जहाजका टिकट मन्त्री र सांसदको पावरमा बाँडियो
वर्षमा एक दिन आज हनुमानढोका दरबारको तजेलु भवानीको मन्दिर खुला